Zụta Portable Super Fast-Heat Handheld Steamer - Free Mbupu & Enweghị |tụ | WoopShop®
Obere ngwa-ngwa igwe eji eji ngwa ngwa
ụgbọ mmiri ndị si China Poland Russian Federation Spain United States France Belgium
Obere ngwa-ngwa igwe eji eji eji aka - pink / China na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Okpomọkụ Gear: Otu Gear
Nhazi: Steam ahịhịa
Ike (W): 1501-1799W
Ike tankị mmiri (l): <0.8L
Oge Steam (Nkeji): 80min
Na-akwado Mgbu Akọrọ Ọkụ: Ee
Ngwaahịa ngwaahịa: ABS, PC, modulu kpo oku eletrik.
Ogologo ike: mita 1.8, ụdọ ike ọla kọpa zuru ezu.
Voltaji: 110V-240V (USplug / EU nkwụnye)
Ike ngwaahịa: 1500W / 50-60Hz
Ike nke mmiri: 250ml
Ọnọdụ kpo oku: ụdị ọkụ ọkụ eletrik.
Ihe eji eme ihe: ironing nke uwe, uwe elu, uwe ime, akpa, neckties, wdg.
Ọrụ ngwaahịa: ironing, humidifying, disinfecting, and sterilizing
Azu oru: 800g
Ngwaahịa a bụ ezigbo ụlọ na nhicha ụlọ na-eme ka ọ dị mma na gburugburu ebe obibi, ọ na-aga n'ihu na-ebugharị uzuoku na ikuku dị elu maka ịkpụchasị, nsị, nhicha, wdg. .
Ijikọ ike ọkọnọ, ọ nwere ike ịmepụta na-aga n'ihu, okpomọkụ dị elu, na uzuoku dị elu na nkeji abụọ. Ọ dabara adaba maka ihicha ụlọ na ihicha akwa.
Ntughari: uzuoku di ike nwere ike ime ka uwe, ákwà ngebichi, akwa, pillowcases, wdg. eji ihe nchara eji eme ihe, na mgbakwunye ironing, kamakwa igba ogwu akwa na iwepu isi.
Ta ụlọ: oké okpomọkụ na uzuoku siri ike nwere ike igbu ọtụtụ nje ndị na-emerụ ahụ ngwa ngwa ma hụ na ịdị ọcha nke ezinụlọ.
Nhicha: Igwe na-ekpo ọkụ na uzuoku siri ike nwere ike igbari ma wepụsị mmanụ mmanụ, unyi, na ebu ntụ n'elu na mgbawa nke ngwaahịa ezinụlọ. Ngwaahịa na-onwem na ahịhịa, windo ahịhịa isi, na ejection nke elu-okpomọkụ uzuoku n'otu oge, nwere ike sikrob elu nke ihe, ọcha dị mfe ma ngwa ngwa, mmetụta dị ịrịba ama.
Nkewa mmiri tank: mfe dismantling na mmiri na-agbakwunye, bụ a belatara mbipute nke vetikal nghọta steamer igwe, nke bụ nnọọ ewu ewu na ahịa.
Jikọọ ike ọkọnọ, ọkụ ndị na-egosi ike ịmalite ịmalite ịgba ọkụ, ahụ ọkụ na-amalite ikpo ọkụ ruo mgbe ọkụ ahụ gosipụtara, ịnwere ike iji ya.
N'ime ọrụ, a na-agbanye bọtịnụ uzuoku wee tọpụ ya nke ọ bụla na sekọnd 2 ọ bụla, enwere ike ịmepụta nnukwu ọnụọgụ nke nrụgide dị elu na nrụgide dị elu site na ihu ihu.
Ihe mgba ọkụ ahụ nwekwara akụrụngwa akpaka, nke nwere ike ịgbanye na-akpaghị aka mgbe niile.
Cheta na: Ngwa ngwa ngwa pịa, mmụba nwa oge na ụda uzuoku, mana obere okpomọkụ ahịhịa, nwere ike ime ka ahịhịa ahịhịa ezughi oke. Karịsịa na akwa akwa, ọ ka mma iji nwayọ nwayọ pụọ na uzuoku, iji hụ na mmepụta nke uzuoku dị elu, nke mere na ọ dị mfe karị ịcha akwa.
Ọ bụ ihe dị njọ na ahụ ga-enwe ahụ ọkụ n'oge ọrụ. Ngwaahịa a nwere ihe nchebe na-ekpo ọkụ. Ọ bụ nchebe na ntụkwasị obi.
1 X Igwe eji arụ ọrụ
1 X Isi ntutu isi
Ntuziaka 1 X
Na-akwanyere ùgwù, nnyefe ngwa ngwa na ngwaahịa ndị yiri ka ha na-arụ ọrụ nke ọma
Iwu iwu 13.11. Na Minsk, onye ozi ahụ nyefere 31.12, onyinye kwụ ọtọ maka afọ ọhụrụ. Naanị m nwetara ya na tulle. Na mbụ ọ tụgharịrị, ụgbọala na-agba ọsọ ọsọ, ọ nweghị ihe dị larịị. Mgbe ahụ ọ malitere ijide mint ahụ ogologo. Echere m na ọ na-agbazi. Naanị ihe, n'ihi ihe ụfọdụ, tulle n'ebe ụfọdụ ghọrọ ịgba alụkwaghịm pink na-egbuke egbuke. Steam na-amasị m! Cool smoothes na ngwa ngwa.
Verybuga ọtụtụ ụbọchị, ọbụlagodi karịa ọsọ! Ọbụna 31.12 nyefere. Onyinye maka afọ ọhụrụ dị! Na-arụ ọrụ nke ọma, ọrụ ya na-arụ ọrụ karịa ka m chere! Echere m na ọnụahịa dị mma maka ngwaike! M itinye foto tupu na mgbe! Na ngwa ngwa nke a bụ otú o si gbanwee. Baajị ahụ dị n’elu uwe elu ahụ bụ rọba, ọ bụrụdị na ọ karịrị ya asịrị!
Ọ bụghị nwalere ma nke ọma juputara na ngwa, ịtụ na 27 wee nata ya na 31
Ndị ahịa weere anyị 5.0 / 5 dabeere na nyocha 59483.